> Resource > iPhone > Sidee Macdan Videos ka kaabta iPhone / Lugood
Waxaan soo saaro karaa videos kaga imaanayo iPhone?
Shalay, aan iPhone la xaday. Waxaan badan videos gaaban ku kaydsan ku yaal. Sida muuqata, Anigu iyaga ma ka iPhone si toos ah u heli karaan. Ma doonayo in ay iibsadaan iPhone kale. Haddaba su'aashu waxay tahay, waxaan soo saaro karaa videos kaga imaanayo iPhone file? Waxaan synced iPhone la Lugood si joogto ah. Sidee ayaan u soo kaban karto, videos ka file gurmad ah?
Si aad u soo saaro videos kaga imaanayo iPhone, jirto hal waddo oo keliya, iyadoo la isticmaalayo qalab dhinac saddexaad, laakiin qalab ma aha oo kaliya mid ka mid ah. Haddii aadan haysan wax fikrad ah oo ku saabsan hadda, Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Windows) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Mac) waxa uu noqon karaa fursad weyn. Barnaamijka Tani waxay u ogolaaneysaa in aad soo saaro video iyo macluumaad kale oo ka gurmad iPhone / Lugood in 2 talaabooyinka, iyadoo aan loo eegayn in aad isticmaasho computer Windows ama mid Mac OS. Waa maxay dheeraad ah, waxa aad bixisaa version tijaabo ah, taas oo kuu ogolaanaysaa inaad soo saaro oo ku eegaan xogta gurmad iPhone lacag la'aan ah. Waa maxay sababta aan isku dayaan hadda?
Fiiro gaar ah: Ka sokow video saarida kaga imaanayo Lugood, Wondershare Dr.Fone ee macruufka sidoo kale si toos ah karaan kabsado tirtiray videos ka iPhone , iPad iyo iPod taabto. Waa quruxsan waxtar leh oo aad marka aanad lahayn gurmad Lugood ah ka dib markii laga badiyay muhiim videos.
Next, aynu isku dayaan sidii ay u soo kaban videos kaga imaanayo Lugood in tallaabooyinka. Labada versions shaqeeyaan si la mid ah. Halkan, qaado version Windows ah, tusaale ahaan.
Tallaabada 1. Dooro gurmad iPhone oo ku soo saaro
Orod barnaamijka on your computer ka dib markii aad u soo dajiyo. Markaas riix kaabta File soo kabsado Lugood menu on sare ee suuqa kala barnaamijka. Marka aad halkaas ku tahay, barnaamijka ka heli doontaa dhammaan Lugood files gurmad on your computer si toos ah. Mid ka mid ah si aad u iPhone Dooro iyo riix Start Scan badhanka si ay u soo saaro.
Fiiro gaar ah: Marka aad taas samayn, uma baahnid in aad iPhone ku xiran haddii ay gacantaada. Ama file gurmad ah la cusbooneysiin doonaa marka aad u soo jeestay oo ku saabsan .Wadashaqayntaas ee si toos ah ula Lugood.
Tallaabada 2. Check oo soo kabsado videos kaga imaanayo iPhone
Ka dib markii ay ka fiirsato, barnaamijka aad dib u siin doonaa natiijo scan, halkaas oo aad ku eegaan karo iyo hubiyo xogta gurmad in qaybood. Wixii videos, waxaad ka heli kartaa qeybta Roll Camera ah. Videos ma aha previewable. Waxaad u baahan tahay si ay u soo kabtaan si aad u computer oo aan u daawado ciyaaryahanka a. Waa wax aad u sahlan. Sax shey kasta oo aad rabto oo guji Ladnaansho button iyaga badbaadiya on your computer. Waa intaas.
Haddii aad rabto in aad si toos ah baarista iPhone inuu ka soo kabsado xogta lumay ka, waxaad u baahan tahay inaad ugu bedesho hab u soo kabashada kale, ka soo kabsado Device macruufka. Markaas xiriiriyaan iPhone, waxaa laga baarayo iyo kabsado xogta aad rabto. Waxa kale oo shaqo fudud. Just waxay isku dayaan keligaa la version maxkamadda hore.